के रुसी राष्ट्रपति पुटिन अरूको कुरा सुन्छन्, को हुन् उनका विश्वासपात्र ?
विगत केही सातामा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिए जसको प्रभाव युक्रेन र रुसमा मात्र नभई समस्त विश्वमा नै पर्न सक्छ। यी निर्णयहरू लिनुपूर्व उनले कोसँग परामर्श गरे? के केही विश्लेषकहरूले भने जस्तै मस्कोले देखाएको सैन्यवाद र आक्रामक बोली “सिलोभिकी” भनिने मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको शक्तिशाली प्रभावको नतिजा हो त?
रुसलाई एक शक्तिशाली राष्ट्रपतीय गणतन्त्रको रूपमा लिन सकिन्छ। किनकि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हातमा अधिकांश शक्ति निहित छ र अन्ततः देश कसरी चलाउने भन्ने सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू उनले व्यक्तिगत रूपमै लिन्छन्।
शक्तिको यति फराकिलो दायरा हुँदाहुँदै पनि उनले आफ्ना केही निकटस्थहरूसँग भने परामर्श गर्छन्। विशेषतः त्यस्ता व्यक्तिहरू जोसँग उनको लामो सङ्गत छ र उनीहरू माथि अधिक विश्वास गर्छन्। तीमध्ये प्रायः सुरक्षा निकायको पृष्ठभूमि र बलियो धारणा भएका अधिकारीहरू पर्छन्।
रुसमा धेरै सुरक्षा र कानुन बनाउने निकायहरू छन् जसलाई “सिलोभिकी” (रुसी भाषामा ‘सिला’को अर्थ बल हुन्छ) भनिन्छ। भ्लादिमिर पुटिन आफैँले तीमध्येको ‘केजीबी’ भनिने गुप्तचर निकायबाट आफ्नो पेसागत यात्रा सुरु गरेका थिए। केजीबी सोभियत पतनपछि रुसी सङ्घीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) बन्यो। पुटिन सत्तामा आएदेखि “सिलोभिकी” को प्रभाव बढ्दै गएको छ।
शीर्ष पाँच सल्लाहकार
रुसको अधिकांश आन्तरिक तथा परराष्ट्रनीतिका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रायः सुरक्षा परिषद्को बैठकमा हुने गर्छ। उक्त परिषद्‌मा शीर्ष “सिलोभिकी” छन् जसअन्तर्गत एफएसबी र परराष्ट्र गुप्तचर निकायका प्रमुखहरू, आन्तरिक, परराष्ट्र तथा रक्षामन्त्रीहरू, साथै प्रधानमन्त्री र संसद्का दुवै सदनका सभामुख पर्छन्। रुसी सुरक्षा परिषद्‌मा कुल ३० सदस्य छन्।
सुरक्षा परिषद्का सचिव निकोलाई पात्रुशेभ, रुसी सुरक्षा सेवा (एफएसबी) का प्रमुख अलेक्जान्डर बोर्तनिकोभ र रुसी परराष्ट्र गुप्तचर निकाय प्रमुख सर्गेई नारीस्किन सबैले भ्लादिमिर पुटिनलाई दशकौँदेखि चिन्छन्। उनीहरू सन् १९७० देखी लेनिनग्राद भनिने सेन्ट पिटर्सबर्गबाट पुटिनसँगै सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगु र विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोफबाहेक अन्य पाँच व्यक्ति छन् जो भ्लादिमिर पुटिनसँग निकट छन्। यी पाँच व्यक्तिको विचारलाई परराष्ट्रनीति मामिलाका निर्णयमा पुटिनले उच्च मूल्याङ्कन गर्छन्।
निकोलाई पात्रुशेभ सुरक्षा परिषद्का सचिव हुन्, पुटिन प्रमुख हुन्। पात्रुशेभ राष्ट्रपतिको टोलीभित्र एक महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। उनको र भ्लादिमिर पुटिनको सङ्गत सन् १९७० बाट सुरु हुन्छ जति बेला उनीहरू दुवैले लेनिनग्रादस्थित केजीबीमा सँगै काम थालेका थिए।
‘केजीबी’को उत्तराधिकारीको रूपमा आएको अर्को निकाय ‘एफएसबी’को प्रमुखको रूपमा पुटिनको स्थानमा सन् १९९९ मा पात्रुशेभ आएका थिए। उनी सन् २००८ सम्म यो पदमा रहे। उनी पुटिनको सबैभन्दा निकटस्थमध्ये एक हुन् र सायद पुटिनमा सर्वाधिक प्रभाव जमाउन सक्ने बोली उनकै मानिन्छ।
तर सबैभन्दा नजिकको विश्वासपात्र र सल्लाहकार वास्तवमा रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगु हुन् जसले रुसी सैन्य गुप्तचर निकाय ‘जीआरयू’ समेत हेर्छन्। जीआरयूका चरहरूलाई सन् २०१८ मा ब्रिटेनमा भूतपूर्व रुसी एजेन्ट सेर्गेई स्क्राइपाल र सन् २०२० मा साइबेरियामा विपक्षी राजनीतिज्ञ एलेक्सी नाभाल्नीलाई विष दिएको आरोप लागेको थियो। स्रोतका अनुसार सन् १९९० को दशकमा पुटिन र शोइगुबीचको सम्बन्ध चिसो थियो। तर २००० को दशकमा उनीहरूको फेरि कुरा मिल्यो र अन्ततः घनिष्ठता बढ्यो।
उनीहरू नियमित रूपमा साइबेरियामा सँगै छुट्टी मनाउन जान्छन् जुन शोइगुको गृहनगर हो। एफएसबी प्रमुख अलेक्जान्डर बोर्तनिकोभले लेनिनग्रादस्थित केजीबीमा भ्लादिमिर पुटिनसँगै सेवा गरे।
उनी सन् २००८ मा पात्रुशेभलाई प्रतिस्थापन गर्दै एफएसबी प्रमुख बने। उनी दशकौँ अनुभव भएका काउन्टर इन्टेलिजन्श एजेन्ट हुन्। जानकारहरूका अनुसार रुसी राष्ट्रपतिले एफएसबीबाट प्राप्त गरेको गुप्त जानकारीहरू अन्य कुनै पनि स्रोतबाट आएको जानकारीभन्दा बढी विश्वास गर्छन्।
एफएसबीको कानुन बनाउने अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि प्रभाव छ। जस्तैः आन्तरिक मन्त्रालय र अभियोजक जेनरलको कार्यालय। ब्रिटेनको विशेष हवाई सेवा (एसएएस) जस्तै एफएसबीको पनि आफ्नै विशेष हवाई सैन्य बल छ जसमा विशिष्ट अल्फा र भिम्पेल समूहहरू पर्छन्।
परराष्ट्र मामिलामन्त्री सर्गेई लाभ्रोफ हक्की र आक्रामक स्वभावका छन् र बोर्तनिकोभभन्दा विपरीत छन्। रुसका अनुभवी कूटनीतिज्ञमध्ये एक लाभ्रोफले सन् २००४ देखि लगभग दुई दशक परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन्।
लाभ्रोफले पुटिनसँग अध्ययन वा सुरक्षा सेवामा सँगै काम भने गरेनन्। यद्यपि रुसी राष्ट्रपतिले उनलाई धेरै आदर गर्ने बताइन्छ। समकालीन साथी र सङ्गतको साथ र सहयोगभन्दा पर आफ्नो व्यावसायिकता, कडा परिश्रम र लामो सेवा अवधिमा केही गल्ती नगरी उनले यो प्रतिष्ठा आर्जेका हुन्।
बोर्तनिकोभ र पात्रुशेभजस्तै, विदेशी गुप्तचर प्रमुख सर्गेई नारीस्किनले लेनिनग्रादमा भ्लादिमिर पुटिनसँगै सेवा गरे। गुप्तचर प्रमुख भए पनि उनी तुलनात्मक रूपमा एक सार्वजनिक अधिकारी हुन् जसले बीबीसीका स्टीभ रोजेनबर्गलगायत धेरै सञ्चारकर्मीलाई अन्तर्वार्ता दिएका छन्।
नारीस्किनलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नेहरू उनलाई पुटिनप्रति समर्पित र स्वभावगत तवरले आदेशहरूको अक्षरशः पालना गर्ने अधिकारीको रूपमा लिन्छन्।
सुरक्षासेवाको पृष्ठभूमि, तीक्ष्ण बुद्धि र व्यावसायिक अनुभवले उनलाई राष्ट्रपतिको भित्री वृत्तमा समाविष्ट हुन गर्न मद्दत पुगेको मानिन्छ। भ्लादिमिर पुटिन नारीस्किनको निकायले उपलब्ध गराउने खुफिया जानकारीहरूमा भर पर्ने गरेको विश्वास गरिन्छ।
सुरक्षा परिषद् निर्णय शक्तिको केन्द्र
रुसी सुरक्षा परिषद्को भर्खरको एक बैठकमा पूर्वी युक्रेनका पृथक्तावादीद्वारा नियन्त्रित दुई क्षेत्रलाई छुट्टै “गणतन्त्र” को मान्यता दिइनुपर्ने अनुरोधमाथि छलफल गरिएको थियो। उक्त बैठकले सुरक्षा परिषद्को कार्यशैलीबारे पूर्ण झलक प्रदान गर्‍यो।
बीबीसीकी पूर्वी युरोप संवाददाता सारा रेन्सफोर्डले बैठकलाई रङ्गमञ्चको एउटा यस्तो हिस्साको रूपमा वर्णन गरिन् जहाँ सबैको आआफ्नो निर्धारित भूमिका र संवाद छ।
“रुसका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारीहरू भ्लादिमिर पुटिनको अगाडि अर्धवृत्ताकार लहरमा बसेका थिए। आफ्नो पालोमा उनीहरू एकएक गरी माइक सामुन्ने जाँदै पुटिनले सुन्न चाहेको कुरा बताउँदै थिए,” रेन्सफोर्डले भनिन्।
अन्य विश्लेषकहरूले भने उक्त बैठकमा जटिल समूह गतिशीलता देखे। “हामीले बुझ्नुपर्छ कि सुरक्षा परिषद् भनेको परस्परमा साथी नभएका मानिसहरूको बैठक हो – तिनीहरू एकअर्कासँग द्वन्द्वमा पर्ने सम्भावना छ,” कार्नेगीको मस्को केन्द्रका विशेषज्ञ अलेक्जान्डर बाउनोभले भने।
“उनीहरूले [सुरक्षा परिषद्को बैठकमा] जे भनेका थिए त्यो उनीहरूले के सोचेका थिए भन्ने अभिव्यक्ति मात्र थिएन, पुटिनको भित्री र खास मानिसहरू सम्मिलित स्थानमा आफूलाई कमजोर नदेखाउने प्रयास पनि थियो।”
बैठकले सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूमाथि व्यक्तिगत रूपमा भ्लादिमिर पुटिनको कत्तिको नियन्त्रण छ र उनले सार्वजनिक रूपमा उनीहरूलाई कसरी धम्क्याउन वा तमासा बनाउन सक्छन् भन्ने तथ्य उजागर गर्‍यो। लामो समयको सङ्गत र निकटस्थताका बावजुद पुटिनको वर्चस्वसामु उनीहरू निरीह र कम सुरक्षित छन् भन्ने झल्किन्थ्यो।
लामो समयको सहकर्म र सम्भवतः एक व्यक्तिगत मित्र भए पनि गुप्तचर प्रमुख सर्गेई नारीस्किनलाई “स्पष्ट रूपमा बोल्न” भन्दै पुटिनले गाली गरे जब उनले “पश्चिमी साझेदारहरू” लाई विद्रोहीनियन्त्रित क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र मान्यता दिनुअघि “अर्को मौका” दिनु पर्ने सुझाएका थिए। फलस्वरूप पुटिनले स्पष्ट रूपमा नारीस्किनलाई तत्काल मान्यताको लागि आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्न कडा निर्देशन दिए। नारीस्किनले तत्काल मान्यता दिइने कुरामा समर्थन जनाए पनि उनी हताश देखिन्थे।
“नारीस्किन निकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिए र आफ्नो विचारमा अलमल देखाएको कारण जनाउँदै पुटिनले उनलाई धम्क्याए। यसले के कुरामा जोड दिन्छ भने उनी मालिकको एक सेवक मात्र हुन्, निकटस्थ होइनन्। पछिल्लो समय कडा टिप्पणीकारको छवि बनाए पनि विगतको आफ्नो सेवाका कारण समेत सम्मान नपाइने यस घटनाले देखाएको छ,” रक्षा र सुरक्षा अध्ययनको लागि राजकीय संयुक्त सेवा संस्थानका मार्क गालोट्टीले ट्वीटमार्फत् भने।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्यले नारीस्किनको जत्तिकै तनाव महसुस गरेनन्। रक्षामन्त्री शोइगु, विदेशमन्त्री लाभ्रोफ र एफएसबी प्रमुख बोर्तनिकोभ ३० सदस्यीय सुरक्षा परिषद्का मात्र त्यस्ता सदस्य थिए जसलाई निर्णायक बैठकमा दुई पटक बोल्न भनिएको थियो।
लाभरोभले कूटनीतिक प्रयासहरू जारी राख्न समर्थन व्यक्त गरे, जबकि शोइगु र बोर्तनिकोभ आक्रामक स्वभावमा देखिए र पूर्वी युक्रेनी-रुसी पृथक्तावादीहरूलाई मान्यता दिन जोड दिए। सुरक्षा परिषद्को यो बैठक यस कारण पनि असाधारण थियो किनभने यो रुसी राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रसारित थियो। सामान्यतया सुरक्षा परिषद्को बैठक गोप्य हुन्छ।
बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको दाबी गरिएको थियो। यद्यपि यो दाबी कत्तिको साँचो हो भन्नेमा प्रशस्तै शङ्काहरू उब्जिएका थिए। भिडिओ सूक्ष्म तवरले नियालेका केही पर्यवेक्षकहरूका अनुसार बैठकमा उपस्थित केहीको घडीले देखाएको समय प्रत्यक्ष प्रसारणको समयसँग मिल्दो थिएन।
पुटिनले रुसी प्रतिष्ठानभित्र र बाहिरका अन्य प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग पनि व्यक्तिगत छलफल गर्ने बताइन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक येभ्गेनी मिन्चेन्को धेरै वर्षदेखि रुसी अभिजात वर्गको अध्ययन गर्दै आएका छन्। उनले नियमित रूपमा भ्लादिमिर पुटिनको सङ्गतहरूबारे प्रतिवेदनहरू सङ्कलन गर्छन्, जसलाई उनले सोभियत कम्युनिस्ट शीर्ष नेताहरूको सम्मानस्वरुप “पोलिटब्यूरो २.०” भनेर सम्बोधन गर्छन्।
आफ्नो २०२१ को पछिल्लो प्रतिवेदनमा मिन्चेन्कोले राष्ट्रपति पुटिनको निकटस्थका रूपमा मस्कोका नगरप्रमुख सर्गेइ सोब्यानिन र राज्य-स्वामित्वको तेल कम्पनी रोसनेफ्टका प्रमुख इगोर सेचिन रहेको उल्लेख गरेका थिए।
अर्बपति दाजुभाइ बोरिस र अर्काडी रोटेन्बर्ग पनि भ्लादिमिर पुटिनको निकटवर्तीका रूपमा चिनिन्छन् जसलाई पुटिनले विश्वास गर्ने र उनीहरूलाई पुटिनको बाल्यकालका साथी पनि मानिन्छ।
दुवैको नाम यसै हप्ता बेलायतले रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा उल्लेख गरेको थियो। सन् २०२० मा फोर्ब्स पत्रिकाले यी दुई दाजुभाइलाई देशको सबैभन्दा धनी परिवारको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। बीबीसी